Fanoloan-toerana :: Handeha ny antso ho an’ireo liana ho tale jeneralin’ny Jirama • AoRaha
Fanoloan-toerana Handeha ny antso ho an’ireo liana ho tale jeneralin’ny Jirama
Hofenoina ny banga. Tsy ho ela intsony dia handefa antso fahalinana ho an’ireo olona mahafeno fepetra hisahana ny andraikitry ny tale jeneraly vaovaon’ny orinasa Jiro sy Rano Malagasy (Jirama) ny minisiteran’ny Rano sy ny Angovo ary ny Akoran’afo. Tsy hisy fanapahan-kevitra politika handeha ho azy fa handalo mason-tsivana ny fanendrena, ka ao anatin’ny filan-kevitry ny minisitra no hanapahana an’izay olona mendrika.
Araka ny fanazavan’Andriamanga Vonjy, minisitry ny Rano sy ny Angovo ary ny Akoran’afo omaly dia “olona mahay mitantana sy hentitra amin’ny fanapahan-kevitra ary manana fahamatorana amin’ny asa hatao no ilaina. Asa iombonana ny fitantanana ny Jirama, hoy izy, ka hotakina ny fahaizana miara-miasa amin’ny hafa satria izany no fototry ny olana nahatonga ny tsy fifankahazoana niseho teo aloha”. Nampiany fa “tanjona tsy maintsy hotratrarina ato anatin’ny roa taona ny handoavana tanteraka ny trosan’ny Jirama sy ny hanarenana ny orinasa”, hoy izy.
Nampahafantarin’io minisitra io fa “mandra-pahatongan’ny andro hanendrena izay ho tale jeneraly vaovaon’ny Jirama dia efa misy rafitra manokana miandraikitra ny fampandehanan-draharaha ao amin’ny orinasa”.
Antenimierampirenena :: Nibahana ny ady hevitra ny fiadiana tombontsoa